Xog: Maydka Col Ciise Jiijiile oo ay diideen Beeshiisu in la aaso, Maxay tahay sababtu,? – Hornafrik Media Network
By HornAfrik	 Last updated Jul 27, 2017
Taliye Ku Xigeenkii hore ee Nabadsugidda Gobalka Banaadir, Col Ciise Jiijiile oo Shalay ay dileen Ciidamo ka tirsan Madaxtooyadda oo uu horkacayay Gaashaanle Dhexe, Cumar C/raxmaan iyo Xasan Aadan (Xasan Jiis) waxaa ka taagan Xiisan xooggan. Waxayna Eheladda Sarkaalka dhintay ku adkaysanayaan inaan la duugayn Maydka illaa lala duugayo Saraakishii ka dambaysay Dilka Ciise Jiijiile.
Illo Wareedyo ayaa u xaqiijiyay Hornafrik in Maydka Marxuum Ciise Jiijiile uu wali ku jira Qaboojiyaha Maydka, iyadoona ay diideen Beesha uu ka dhashay in la aaso, Waxayna ku adkaysanayaan in Tiirka la soo taago Cumar C/raxmaan oo lahaa Amarka lagu dilay Ciise iyo Ciidankii la socday, iyo Xasan Jiis oo ahaa Sarkaalka hawsha fuliyay ee uu soo amray Cumar C/raxmaan.
Cumar C/raxmaan-Taliye Urur ka tirsan Madaxtooyo
Cumar C/raxmaan oo ah hadda Gaashaanle Dhexe waxa uu ku soo biiray Ciidanka Xoogga waqtigii uu ahaa Madaxwayne, Shariif Sh Axmad, isagoo xilligaasi ka mid ahaa Dhalinyaro ka soo goostay Alshabaab. Waxaana uu tan iyo waqtigaasi ahaa Taliye Urur ka tirsan Madaxtooyo, balse waxaa laga ruqseeyay Madaxtooyo markii ay Ciidankiisu dileen Taliye Ku Xigeenkii hore ee Madaxtooyo, kaasoo lagu dilay Gudaha Madaxtooyo, waqtigii uu Madaxwaynaha ahaa Xasan Sh.
Cumar waxaa dib ugu soo celiyay Madaxtooyo Col Afcadeey markii loo magacaabay inuu noqdo Taliyaha Ciidanka Madaxtooyadda Somalia. Waxayna Saraakii ka tirsan Madaxtooyo u sheegeen Hornafrik in soo celinta Cumar ay shaki ka dhex abuurtay Ciidanka Madaxtooyo iyo Saraakiishooda, maadaama uu yahay Shaqsi Qatartiisa leh.
Dadwayne Caraysan ayaa sidoo kale Maanta isugu soo baxay Wadada Shaqaalaha, kuwaasoo dalbanayay in Cadaaladda la hor keeno Cumar C/raxmaan iyo Xasan Jiis.
Carradda ugu wayn waxay ka dhalatay markii la dilay Taliye Ciise Jiijiile iyo Askarta la socotay waxaa goobta yimid Gaashaanle Cumar C/raxmaan oo lahaa amarka Dilka, Wuxuuna Marxuumka oo dhaawac diiday in la qaato illaa uu Dhiig bax u dhimanayay.
Marxuum Ciise Jiijiile
Maydka Ciise Jiijiile oo yaala Wadada.
W.Q: Cismad Ali Iidle